Company vaovao - Zhejiang Lucky Manufacturer Co., Ltd
Professional trondro Finder Manufacturing Pionner in China Since 2003
Kalitao avo sy ny asa fanompoana tsara indrindra dia ny kolontsaina. Io no vokatra mahagaga indrindra natao ho an'ny matihanina sy ny mpanjono samy matihanina, mba Finder ny toerana misy ny trondro, lalina sy ambany contour ny rano. Amin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia mahatalanjona sy ny zava-baovao, izay nahita trondro io no fitaovana tsara indrindra mba hitondra ny trondro ho anao!
Naorina tamin'ny 2003, Zhejiang Lucky Manufacturer Co., Ltd dia matihanina sy za-draharaha misahana manokana ny fanjonoana mpanamboatra an-tsaha.
Maha-orinasa fampidirana R & D, orinasa mpamokatra entana, sy ny varotra, isika hanana vokatra vaovao isan-taona, ny mifehy ny vokatra 'hentitra tsara, ary manana mpividy ao an-trano sy any ivelany.
Araka ny teny faneva 'fanjonoana mahatonga ny fiainana tsara kokoa "mampiseho, Lucky isika dia nanokana ny fanolorana olona traikefa tsara indrindra eo amin'ny jono sy ny lehibe indrindra eo amin'ny fiainana mahafinaritra.
1.Professional mpanamboatra Maherin'ny 10 taona ny mpanamboatra traikefa amin'ny jono an-tsaha, ary tsara ofana mpiasa, QC henjana, ary mafy ny varotra sy ny R & D ekipa, dia manome mpanjifa manara-penitra sy matihanina vokatra.
2.Expert service Tanteraka amin'ny orinasa mpamokatra entana, teknika, sy ny varotra ekipa, isika dia manao fiaraha-miasa aminay traikefa tena tsara ho an'ny mpanjifa. Mandrakariva isika vonona ny hanompo ho anareo.
3.Innovative saina Miaraka amin'ny fanavaozana ny saina miova ny zavatra rehetra, dia mbola tsy nitsahatra ny dingana creation.New vokatra no nampidirany ny tsena sy ny mivelatra mampino tsena vaovao ho an'ny mpanjifa.
4.Competitive vidiny Miaraka amin'ny kalitao sy ny nalaza ho napetraka, nanokana isika mba hanome ny tsara indrindra sy ny vokatra tsara indrindra ho an'ny mpanjifa fanompoana feno avy amin'ny mpanjifa soa.
2. manana tsara ofana sy passional varotra & after- fivarotana asa izay afaka Mahay miteny anglisy tsara teny
3. hanolotra OEM tolotra. Afaka printy anao manokana Fish famantarana amin'ny Finder.
4. Manana injeniera tena za-draharaha, dia afaka manampy anao hampiasa tsara kokoa trondro Finder
No. 1966, Cuntong Road, Dongxiao Subdistrict, Jindong Jinhua District tanàna, faritanin'i Zhejiang, Sina
Lucky FAMPANDROSOANA Timeline